Lalaon’i Barea sy Elefanta Mangataka fanemorana i Nicolas Dupuis
Ny alarobia lasa teo dia nanao fanambarana ny filoham-pirenena frantsay fa miverina amin'ny fihibohana indray ny ao Frantsa, hoy ny mpanazatra ny ekipam-pirenena malagasin’ny baolina kitra, Nicolas Dupuis.
Mathias Randriamamy Hanao Champions league miaraka amin’ny PSG
Tafiditra ao anatin'ny lisitry ny mpilalaon'ny PSG hiatrika an’i Istanbul basaksehir hanafika any Torkia sahady ilay mpiandry harato vaovaon’ny ekipam-pirenena malagasy, Mathias Randriamamy.
Ahmad Tsara toerana mbola ho filohan’ny CAF
Federasionina miisa 9 amin’ireo firenena 54 mpikambana eo anivon’ny kaonfederasionina afrikanin’ny baolina kitra sisa no tsy nanao fanambarana fa manohana ny filatsahan’ny filohan’ny CAF ankehitriny,
Barea # Elefanta Ilay Tonizianina Haythem Guirat no hitsara ny lalao
Araka ny fampahafantarana nataon’ny teo anivon’ny kaonfederasionina afrikanin’ny baolina kitra na CAF dia ny mpitsara Tonizianina, Haythem Guirat, no hitsara ny lalao mandroso eo amin'ny Elefanta sy ny Barea,
Fifidianana filohan’ny CAF Mbola tsara toerana hatrany i Ahmad
Miroso mankany amin’ny fifidianana izay ho filohan’ny federasionina afrikanin’ny baolina kitra vaovao ireo mpitondra federasionina aty amin’ny firenena Afrikanina .
Mathias Randriamamy Niakatra ho sokajy “senior” ao amin’ny PSG
Taorian’ny naha voaantso azy ho isan’ny mpilalaon’ny Barean’i Madagasikara, sokajy “senior”, dia tsy nijanona ho U19 eo anivon’ny ekipany ao Paris dia ny PSG intsony ny mpiandry tsatokazo vaovaon’ny ekipam-pirenena malagasin’ny baolina kitra,
Fitantanana ireo Barea Mila tena hentitra ny mpanazatra
25 lahy ireo voaantso handrafitra ny ekipam-pirenen’ny baolina kitra Malagasy farany teo. Hiatrika fampivondronana moa izy ireo ny fiandohan’ny volana
sy ny ekipany ao amin’ny Al khor sport club. Saika nibaby faharesena an-jaridaina ny zoma teo ny Al khor nanoloana ny andrarezina Arabi raha tsy nanokatra ny isa teo amin’ny minitra faha 72 tamin’ny alalan’ny penalty ity Malagasy ity. Efa nitarika 2 noho 0 hatreo amin’ny minitra faha 71 moa ny mpifanandrina. Tany amin’ny minitra faha 93 kosa vao naha sahala ny isa ho 2 noho 2 tamin’ny alalan’ny daka mandrivorivon’I Helal Mohammed ny Al khor. Isan’ireo ekipa matanjaka ao Qatar ny Al Arabi saingy hita ho mbola afaka manatsara ny tekinikany kosa ry Amada sy ny Al khor ary manana hejirika azony andrombahana ny amboara ho amin’ity Qatar stars league 2020-2021 vao miandoha ity.